बादल किन गएनन् बालुवाटार?
नेपाल लाइभ मंगलबार, साउन १३, २०७७, १५:०४
काठमाडौं- नेकपाका शीर्ष नेताहरूबीच पछिल्लो समय चर्किएको विवादलाई लिएर असन्तुष्ट रहेका स्थायी कमिटी सदस्य रामबहादुर थापा ’बादल’ मंगलबार बालुवाटार गएनन्। सोमबार कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ निवास खुमलटारमा भएको वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसहितको बैठकमा पनि नगएका उनी मंगलबार बालुवाटार पनि नगएका हुन्।
बादल मन्त्रालयको काममा व्यस्त भएकाले बालुवाटार नगएको उनका प्रेस संयोजक किरण भट्टराईले बताए। देशभर बाढी पहिरो, राहत र उद्धारको कार्यमा ध्यान दिनुपर्ने भएकाले बालुवाटार जान नभ्याएको उनले बताए।
अध्यक्ष ओलीले बैठक अनिश्चित कालका लागि स्थगित गराएपनि कार्यकारी अध्यक्ष दाहालले वरिष्ठ नेताहरू झलनाथ खनाल र माधव नेपालको उपस्थितिमा स्थायी कमिटी बैठक राखेका छन्। मंगलबार बालुवाटारमा अर्का अध्यक्ष ओलीसँगको भेटबारे दाहालले आफू र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालनिकट स्थायी कमिटी सदस्यहरुलाई ब्रिफिङसमेत गरेका छन्।
बैठकमा मंगलबार सार्वजनिक गरिएको ६ बुँदे धारणाबारे उपाध्यक्ष बामदेव गौतमले पनि आफ्नो मत राख्दैछन्। ओलीले स्थगित गरेपछि आक्रामक बनेको दाहाल–नेपाल समूह बैठक चलाएरै छाड्ने रणनीतिअनुसार अघि बढेको थियो।
बादल यसअघि पनि नेकपाभित्र कुनै पनि विवादको निर्णायक अवस्थामा खुल्ने गरेका छैनन्।
प्रचण्डको ब्रिफिङ- बहुमत स्थायी कमिटी सदस्यको बैठक भनौं
ओलीले एकलौटी स्थगित गरेको भन्दै प्रचण्ड-नेपाल बैठक राख्ने पक्षमा
नेकपामा सकस : बैठक एकतर्फी स्थगनपछि चिढिए प्रचण्ड-नेपाल, नेताहरु बालुवाटारमा
बालुवाटार प्रवेश गरे रक्षामन्त्री
नेकपा स्थायी कमिटी बैठक सुरु, बहुमत सदस्य सहभागी
वामदेवको प्रस्ताव-बाँकी अवधिभर ओलीलाई प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी
प्रचण्ड-नेपाल पक्षको बैठकबारे नेम्वाङको प्रतिक्रिया- थाहा छैन, टिप्पणी पनि छैन
ओली भेट्न गए प्रचण्ड-झलनाथ
केपी ओली, प्रचण्ड, झलनाथ खनाल र बिष्णु पौडेलको भेट सकियो
दुर्घटना नजिक देखिन्छ : योगेश भट्टराई
प्रचण्डले सुरु गरे स्थायी कमिटी बैठक
सत्ता साझेदारीका विषयमा छलफल भएको छैन : प्रकाशशरण महत नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री डा प्रकाशशरण महतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाबीच भएको भेटघाट सत्ता... सोमबार, मंसिर ८, २०७७
अप्ठ्यारोमा परेपछि ओलीको ‘स्टन्ट’ : देउवा भेटेर प्रचण्ड-नेपाल तर्साउने पार्टीभित्र अप्ठ्यारोमा परेका बेला ओलीले विगतमा पनि यस्तो भेट गर्ने र कतिपय चर्चित अभिव्यक्ति दिने गरेका थिए। पछिल्लो भेट र भेटका वि... सोमबार, मंसिर ८, २०७७
प्रधानमन्त्री ओलीसँगको भेटबारे किन बोल्दैनन् देउवा? प्रधानमन्त्री ओलीको सत्ता ‘धर्मराएको’ बेला प्रमुख प्रतिपक्ष दलका सभापतिले भेट्नु अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ। शनिबारको छलफल ‘सत्ता स्व... सोमबार, मंसिर ८, २०७७